Fanafihana nataon’ny jiolahy teo ambaravaran’ny Commune Urbaine Tomasina
Olona iray no maty, lasa ny vola mitentina 55 tapitrisa ariary
Nisehoana fanafihana mitam-basy indray teto Toamasina an-tampotanana, ny alakamisy 14 aogositra, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany latsaka dimy minitra teo ho eo, no nitrangan’izany. Lavon’ny balan’ireo jiolahy i Davidson, ny mpizara vola ao amin’ny commune Urbaine Toamasina, . Raha ny fahitan’ireo nanatri-maso ity raharaha mahatsiravina ity dia roa lahy mitondra moto scooter jog no nahavanon-doza tamin’izao tranga izao.
Mpiasan’ny commune telo lahy no avy naka vola, efa teo ambaravaran’ny commune no nanatona olona roa lahy mitondra basy, ka nitifitra avy hatrany an’i Davidson, nitondra ilay sakosy misy vola.
Vola nokasaina handoavana ny karaman’ny mpiasan’ny commune volana jolay, izao lasan’ny jiolahy izao, araka ny fanadihadiana natao tamin’ny lefitra faharoan’ny PDS Toamasina, Atoa Laurent Jean Maurice.
Nandritra ny fandalovanay teny an-toerana dia hita fa bala roa no namonoana ity raim-pianakaviana ity dia teo amin’ny tendany sy ny lohany izany; maty am-perin’asa arak’izany ity raim-pianakavina ity izay namela kamboty sy mananon-tena iray.
Nirogatra indray ny fanafihana mitam-basy eto andrenivohatry ny Toamasina. Efa sahy manao ny asa ratsiny tsy ankiafina intsony ireo jiolahy fa na amin’ny antoandro be nanahary aza, ary tsy mifidy toerana. Mitebiteby mafy arak’izany ny mponina satria toerana ifamoivoizana sy misy mpiambina izao nitrangan’ny fanafihana izao, hany ka efa tsy tenenina intsony ny eny an-tokatrano na eny am-pivarotana eny. Ary manampy trotraka izany koa ny fiverenan’ny fahatapatapahan’ny jiro indray eto Toamasina.
(71) Lantomalala SAHONDRANIRINA : 15-08-2014 - 08:30